Moat: Cabir Feejignaanta Macaamiisha ee Jidadka, Qalabka, iyo Madallada | Martech Zone
Moat by Oracle waa gorfayn gundhig iyo cabbiraad dhammaystiran oo siineysa xirmo xalal ah oo ku saabsan xaqiijinta xayeysiinta, falanqaynta taxaddarrada, gaadhista isdhaafsiga iyo soo noqnoqoshada, natiijooyinka ROI, iyo suuqgeynta iyo sirdoonka xayeysiiska. Qiyaasta cabirkooda waxaa ka mid ah xalalka xaqiijinta xayeysiinta, feejignaanta, badbaadada sumadaha, waxtarka xayeysiinta, iyo gaaritaanka iyo soo noqnoqoshada.
La shaqeynta daabacayaasha, magacyada, wakaaladaha, iyo barxadaha, Moat waxay gacan ka geysaneysaa gaaritaanka macaamiisha mustaqbalka, qabashada dareenka macaamiisha, iyo cabiridda natiijooyinka si loo furo kartida ganacsiga. Moat by Oracle Data Cloud wuxuu awood kuu siinayaa inaad u dhaqaaqdo dhanka natiijooyinka ganacsi ee wanaagsan.
Eeg aragti mideysan oo ku saabsan kanaallada warbaahinta
Go'aami waxtarka ololahaaga
Fahmaan waxa warbaahintu kaxaynayso hawlgelinta ugu badan
Soo hel hal-abuurka soo jiita dareenka daawadayaasha
Baro noocyada sida ugu fiican ugu shaqeeya ganacsigaaga, adoo adeegsanaya jaangooyooyin warshadeed
Go'aami inaad ku gaadhayso dhagaystayaasha saxda ah inta jeer ee saxda ah
Dulmarka Xalalka Moat
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee xayeysiinta ayaa ah aqoonsiga qashinka, oo ka bilaabma xayeysiinta la gaarsiiyo dhageystayaasha bartilmaameedka ah ama xayeysiinta ku dhufanaya isla dhagaystayaasha marar badan.
Falanqaynta Moat waxay kaxaysaa natiijooyinka ganacsiga iyada oo loo marayo xaqiijin sax ah iyo cabiraada feejignaan ah oo xoojisa istiraatiijiyaddaada warbaahinta dijital ah
Gawaarida Moat wuxuu isku daraa gaadhista heerka dhagaystayaasha iyo soo noqnoqodka si loo helo aragti iskudhaf ah oo ku saabsan cidda aad la gaadhayso xayeysiiskaaga iyo meesha.
Natiijada Moats waxay bixisaa aragti-waqtiga dhabta ah ee ku-oolnimada xayeysiiska ah si aad u sameyso go'aanno caqli-gal ah oo xog-ogaal ah oo ku saabsan xayeysiintaada.
Moat Pro waa aalad sirdoon tartan ah oo bixisa muuqaal gudaha ah oo xayeysiiska tooska ah iyo barnaamijyada laga iibsado noocyada. Fikradaha dib ula noqda sedex sano waxa hada kajira suuqa, waad raadin kartaa, isbarbar dhigi kartaa, lana socon kartaa ololeyaasha waqtiga si aad u fahamto sida istiraatiijiyaddaadu ay ugu xirnaato tartamayaashaada.
In 2017, Oracle waxay ku dartay Moat qaybteeda xoogga leh ee xalalka tiknoolajiyada xayeysiinta. Oracle waxay bixisaa xog iyo teknolojiyad si ay u fahmaan oo ay u gaaraan dhagaystayaashaada si ka sii fiican, qoto dheer hawlgelintaada, oo dhammaan ku cabir Moat.
Hesho Moat Demo
Ku saabsan Xayeysiinta Oracle
Xayeysiinta Oracle waxay ka caawisaa suuqleyda inay adeegsadaan xogta si ay u soo jiitaan dareenka macaamiisha una wadaan natiijooyinka. Waxaa adeegsaday 199 oo ka mid ah 200 ee xayeysiistayaasha ugu weyn ee AdAge, dhagaystayaashayada, Macnaha guud iyo xalka cabbiradu waxay ku fidayaan dhammaan meheradaha warbaahinta ugu sarreeya iyo raad caalami ah oo ka badan 100 waddan. Waxaan siineynaa suuqleyda xogta iyo qalabka loo baahan yahay marxalad kasta oo safarka suuqgeynta ah, laga soo bilaabo qorshaynta dhagaystayaasha ilaa pre-dalabka badbaadada sumcadda, ku xirnaanta macnaha guud, xaqiijinta aragtida, ilaalinta khiyaanada, iyo cabirka ROI. Xayeysiinta Oracle waxay isku daraysaa tikniyoolajiyadaha hormuudka ah iyo kartida ka soo iibsashada Oracle ee AddThis, BlueKai, Crosswise, Datalogix, Grapeshot, iyo Moat.
Ku saabsan Oracle
Oracle waxay bixisaa qolal barnaamijyo isku dhafan oo lagu daray kaabayaal amni oo madax bannaan oo ku jira Oracle Cloud.
Tags: sirdoonka adxayeysiiska ku bixiad kharash garayntaxaqiijinta xayeysiintaadtechbadbaadada sumaddafalanqaynta iskutallaabtasoo noqnoqoshada-madalgaadho-madalganacsifalanqaynta xayeysiiska ganacsigacabirka xayeysiiskaxayawaanfalanqaynta moatnatiijooyinka moatmoot prodhoobo gaartoomnichannelOracledaruuraha xogta oraclexayaysiinta telefishanka